Fanomezana Apple ho an'ny Fetin'ny Ray: AirPods 3 amin'ny 159 euros | iPhone News
Fanomezana Apple ho an'ny Fetin'ny Ray: AirPods 3 amin'ny 159 euros
Ny fetin'ny ray, ny 19 martsa, dia andro tena tsara hanararaotra ireo tolotra isan-karazany misy amin'ity andro ity izay mety ho hitantsika mandritra ireo andro ireo. Ny iray amin'izy ireo dia hita ao amin'ny AirPods faharoa, AirPods sasany azontsika atao mahita amin'ny Amazon amin'ny vidiny 159 euro.
Araka ny efa fantatrao, ny AirPods andiany faha-3, manana ny vidiny 199 euro izy ireo. Raha manararaotra an'io tolotra io isika dia mitahiry 20% amin'ny vidiny mahazatra.
Ary koa, amin'ny fividianana amin'ny Amazon, fantatsika fa Apple no ao ambadik'izany, noho izany hahazo antoka mitovy isika noho ny hoe nividy azy mivantana tamin'ny Apple izahay.
Inona no atolotry ny AirPods taranaka faha-3 ho antsika
Ny AirPods taranaka faha-3 dia manolotra antsika ny fiasa mitovy amin'izay efa hitantsika tamin'ny taranaka voalohany sy faharoa, saingy miaraka amin'ny fanatsarana mahaliana.
Ny AirPods andiany faha-3 manana taho fohy kokoa ary ny endrika misy ny écouteur dia tena mitovy amin'ny AirPods Pro fa tsy misy pad izay tafiditra ao an-tsofina mba hampisaraka antsika amin'ny tabataba.
Na dia manana taho kely kokoa aza, izay mety hitarika ny olona hieritreritra fa kely kokoa ny bateria, dia tsy izany. Raha manolotra antsika hatramin'ny 5 ora fizakan-tena tsy misy fahatapahana ny taranaka faharoa an'ny AirPods, Ny AirPod andiany faha-3 dia mampitombo ny fahaleovan-tena hatramin'ny 6 ora.
Tsy toy ny andiany faharoa, ny AirPods andiany faha-3 mifanaraka amin'ny feo spatial, na dia ahetsiketsika aza izany dia mihena adiny iray ny fizakan-tena.
Ho fanampin'izany, ny raharaha fiampangana, dia mandeha amin'ny 24 ora amin'ny AirPods andiany voalohany sy faharoa izy ireo. 30 ora atolotry ny fahatelo.
Mifanaraka amin'ny MagSafe ny vata fampangatsiahana, izay ahafahantsika ampanjifaina amin'ny pad charging tsy misy tariby ary ataovy tsy misy tariby tselatra.
Vidio ny AirPods 3 amin'ny 159 euros
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Fanomezana Apple ho an'ny Fetin'ny Ray: AirPods 3 amin'ny 159 euros
Afaka mividy iPhone 12 na 12 Pro nohavaozina avy amin'ny Apple ianao izao
Apple dia handao ny modely 'mini' miaraka amin'ny fandefasana ny iPhone 14